डाक्टरको लापरबाहीले अभिनेता राहुल बोहरा …. – Gazabkonews
डाक्टरको लापरबाहीले अभिनेता राहुल बोहरा ….
अभिनेता राहुल बोहराको आइतबार नि ध न भएको छ । उनी कोरोनाद्वारा पीडित थिए र आफ्नो उपचार गराइरहेका थिए । राहुलकी श्रीमती ज्योति तिवारी श्रीमानको वियोगमा छिन् । यसैबीच उनले आफ्ना श्रीमानको न्यायको माग गरेकी छिन् ।ज्योतिले सोसल मिडियामा एउटा पोस्ट लेखेकी छिन् । साथै राहुलको एउटा भिडियो सेयर गरेकी छिन् । जसमा उनले अस्पतालको ला पर वाहीबारे कुरा गरिरहेकी छिन्